Abaalgudyada Shacabka ee Sharafta leh ee Sharciga Sharciga leh
Home > Xayawaanka Sharciga ah
Qiimaynta T & Cs
Shuruudaha Qiimaynta Tamarta ee Energy
Kuwa soo socda ayaa sharxaya shuruudaha aan sameyno qiimeyn ku haboonaanta hantidaada si loogu rakibo qiyaasta waxtarka korantada ("Baadhitaanka").
Codsigaaga Qiimaynta waa dalab aad adigu nagu siiso si aad u gashid heshiis quseeya shuruudahan. Adiga oo kugula heshiinaya taariikhda qiimeyntu ka dhici doonto ("Qiimaynta Taariikhda") waxaad xaqiijineysaa in aad jeclaan lahayd in aan sii wadno Qiimaynta iyada oo ku saleysan shuruudahan. Shuruudahaan waxay noqonayaan oo kaliya inaad adiga iyo annaguna kugula talineysid markaan soo saaro email ama warqad cadeyneysa faahfaahinta Qiimeynta ("Qiimaynta Qiimeynta"), taas oo markaa qandaraasku uu dhexmari doono adiga iyo annaga.
1.1 Waxaan ku dadaaleynaa inaan fulino Qiimeynta Taariikhda Qiimaynta ee hantida lagu qeexay Xaqiijinta Qiimeynta ("Hantida"), laakiin taariikhdani waxay noqon doontaa qiyaasta oo keliya mana aha waqtigii kama dambaysta ah ee waxqabadka heshiiska. Qofka sameynaya Qiimeynta wuxuu noqon doonaa shaqaale ama qandaraasle sare oo ah "Energy Energy Solutions Ltd."
1.2 Si aan u fulino qiimeynta, waxaad ku raacsan tahay:
(a) wuxuu na siiyaa fursad kasta oo ah Hantidaas oo loo baahan yahay inay fuliso Qiimeynta Taariikhda Qiimeynta;
(b) diyaarinta hantida si ay ugu diyaar garoobaan Qiimeynta;
(c) Inay nagu siiyaan dhammaan macluumaadka sida ugu macquulsan looga baahan yahay Qiimaynta iyo hubinta in macluumaadka noocaas ahi ay sax yihiin oo dhammaystiran yihiin;
(d) inoo sheegto wixii khuseeya arrimo qaabdhismeed ama cillado ah Dhulka;
(e) inoo ogeysiiyo haddii hantidaadu ku jirto aag xafidan ama waxay ku xiran tahay xayiraad kasta oo qorsheyn ah;
(f) marwalba annaga ayaa nala shaqeynaya markaan samayno Qiimeynta;
(g) Inay hubiyaan in ay jiraan sahay cunto gaas, biyo iyo koronto oo ku filan oo hubiya in aan helno adeegyadan oo kale marka la samaynayo Qiimeynta; iyo
(h) hadday lagama maarmaan noqoto, na sii si aad u heshid hantidaada taariikh dheeraada (annaga oo qoraal ahaan noogu soo ogeysiisay) si aan u dhamaystirno qiimeynta.
1.3 Kadib dhammaystirka Qiimeynta, waxaan ku dadaaleynaa inaan ku siino qadarin ku saabsan rakibidda qiyaasta waxtarka tamarta. Waxaa laga yaabaa inaan u baahanno inaan helno taariikhdaada hantida si aan u soo aruurinno macluumaad dheeraad ah oo aan ku siino qadar. Haddii aysan suurtogal ahayn in lagu rakibo qiyaasta waxtarka tamarta ee Hantidaada waa inaan kuugu sheegnaa qoraal ahaan.
2. Ogolaansho iyo Ogolaansho
2.1 Waxaad ogolaatay inaad hesho dhammaan ogolaanshaha lagama maarmaanka ah ka hor Waqtiga Qiimeynta. Haddii aad tahay kireyste, waa inaad ka heshaa mulkiilaha ogolaansho qoraal ah ee hore si aan u fulino qiimeynta oo nagu siiso nuqul ka mid ah ogolaanshaha noocan ah ka hor Taariikhda Qiimaynta. Haddii aad tahay qof mulkiilaha ah, waa inaad heshaa kireystaha (iinta) oggolaansho qoraal ah oo horay loo siiyay si aan u helno Hantida, nuqul ka bixinno noocan oo kale ah iyo mar walba hubi in kiraystaha (yada) ay ku dhaqmaan waajibaadka ku xusan 1.2. Haddii aad tahay wadashaqeyn, waa inaad ka heshaa ogolaanshahaaga milkiilahaaga Qiimaynta iyo nuqul ka mid ah ogolaanshaha noocan ah ka hor inta aanu qiimeynin Taariikhda Qiimeynta.
2.2 Kuma qasbanaaneyno inaanu fulino Qiimeynta ilaa iyo inta aad u hoggaansameyso 2.1.
3. Kharashyada iyo lacag bixinta
Haddii aan la xaqiijin Hubinta Qiimaynta, Qiimaynta waxaa lagu samaynayaa lacag la'aan. Waxaan ku heshiinay inaanu fulino Qiimaynta iyadoo tixgelinaysa inaad oggolaato inaad u hoggaansamiso waajibaadka lagu qoray warqadan.
4. Mas'uuliyad haddii aad tahay macaamiil
Qodobadan 4 waxay khuseysaa oo keliya haddii aad tahay macaamiil
4.1 Marka laga hadlo 4.2, haddii midkeenba mid ka mid ah aan ku fashilmin in aan u hoggaanno warqadan, midkeenu midna mas'uul kama aheyn wixii khasaare ah ee kale ee ku dhacay natiijada, marka laga reebo kuwa khasaaray taas oo ah natiijo la filan karo oo ah guuldaradaas warqad.
4.2 Marka laga hadlayo 4.1, kama masuul noqon doonno khasaarihii keenay in aan ku fashilmeyno in aan u hoggaansamno warqadan oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, khasaare soo noqnoqonaya qaybaha soo socda: khasaaraha dakhliga ama dakhliga oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, wixii lumay deeqda, kabitaan ama maalgelin kale; Ganacsi lumis; lumitaanka kaydka la filayo; macluumaadka lumay; ama wakhti kasta oo qashin ah, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, wax khasaare ah sababtoo ah waqtiga shaqada ama waqtiga fasaxa.
4.3 Waxaanu sameyn doonaa wax kasta oo khasaare ah oo ku yimaada hantidaada annaga na soo gaarsiiyey inta lagu gudajirayo qiimeynta ay bixiso taas oo:
(a) inaad isticmaasho dadaal macquul ah oo aad noogu soo sheegto qoraal ahaan dhaawaca ku jira maalmaha 90 ee waxyeelo soo gaartay dareenkaaga; iyo
(b) inaad na siisid fursad macquul ah si aad u sameyso wax kasta oo khasaare ah oo keenaya Hantidaada.
4.4 Kuma masuul ka ah kharashka dayactirka wixii khalad ah ee horay u jiray ama waxyeello u geysatay hantidaada oo aan ka ogaanno inta lagu gudajiro qiimeynta qiimeynta.
4.5 Kuma noqon doonno masuuliyad haddii aan ka hortagno ama aan dib u dhicinno inaan u hoggaanno waajibaadkeena waxkasta oo adiga ama qof kasta oo ku matalaya adiga ama wakiil kaa ah.
4.6 Faqraddan kama mid aha ama xaddidayso si kasta oo ah masuuliyadeena:
(a) dhimasho ama dhaawaca shaqsiyadeed ee ay sababtay dayacaad;
(b) been abuur ama khiyaano been abuur ah; ama
(c) arrin kasta oo ay tahay sharci daro ama sharci-darro inaga naga fogeyn ama isku daya inaan ka saarno masuuliyadeena.
5. Mas'uuliyaddayada haddii aad tahay ganacsi
Qodobadan 5 waxay khuseysaa oo keliya haddii aad tahay ganacsade ganacsi.
5.1 Wax walbo oo ku jira warqadan xaddidan ama ka reeban masuuliyadeena:
(b) been abuur ama khiyaano been abuur ah; iyo
5.2 Marka laga hadlayo 5.1, waxaan ku jiri doonnaa duruufo kasta oo lagugu kalsoonaan karo, ha ahaato inaad qandaraas-ka-qaadid, (oo ay ku jirto dayacaad), jebinta waajibaadka sharciga, ama haddii kale, ka soo if-baxaya ama ku xiran heshiiska:
(a) wixii lumay faa'iidada, iibka, ganacsiga, ama dakhliga;
(b) lumitaanka ama musuqmaasuqa macluumaadka ama macluumaadka;
(c) luminta fursad ganacsi;
(d) lumitaanka kaydka la filayo;
(e) luminta niyad-wanaagga; ama
(f) wixii khasaare ah oo aan toos ahayn ama natiijo ahaaneed.
5.3 Marka laga hadlayo 5.1, dhammaan wadajirkayaga adiga oo ka hadlaya khasaare kasta oo soo kordhay ama ku xiran qandaraaska, ha ahaato qandaraaska, dhaleeceynta (oo ay ku jirto dayacaad), jebinta waajibaadka qaanuuniga ah, ama haddii kale, ma jiri doonaan duruuf ka badan £ 10,000 .
5.4 Marka laga reebo sida lagu caddeeyey waraaqdan, ma siinayno wax matalaad, damaanad ama shaqo. Wakiil kasta, xaalad ama damaanad kaas oo laga yaabo inay la socoto ama lagu daro waraaqdan by qaanuun, xeer caadi ah ama haddii kale waa laga reebay sida ugu badan ee sharcigu ogol yahay.
6. Macaamilkaagu wuxuu xaq u leeyahay inuu joojiyo
Qodobadan 6 waxay khuseysaa oo keliya haddii aad tahay macaamiil
6.1 Haddii aad tahay qof macaamiil ah, waxaad xaq u leedahay inaad ku kansasho qandaraaska sida ku cad Heshiiska Macaamilka (Macluumaadka, Ka-joojinta iyo Kharashaadka Dheeraadka ah) 2013 maalmaha 14 iyadoon wax sabab ah u bixin. Muddada joojinta waxay dhacaysaa ka dib maalmaha 14 laga bilaabo maalinta heshiiska qoraalka ah (sida taariikhda aan soo saarnay xaqiijinta Qiimeynta). Talobixin ku saabsan xuquuqda aad u leedahay in lagaa joojiyo waxaa laga heli karaa Xafiiska La-talinta Muwaadiniinta ee degaankaaga.
6.2 Si aad u isticmaasho xuquuqda aad u leedahay in la kansalo, waa inaad noo sheegtaa go'aankaaga inaad joojiso Heshiiska adigoo u diraya qoraal cad oo qoraal ah boostada ee Kooxda Adeegyada Macaamiisha, Happy Energy Solutions Ltd, Unit 1, New Road, Perranporth, TR6 0DL ama email ahaanmail@happyenergy.co.uk. Waxaan soo jeedinaynaa in aad haysato nuqulka diiwaankaaga. Waxaad isticmaali kartaa foomka ka noqoshada qaabeynta ee lagu dhigay jadwalka, laakiin ma aha qasab. Si aad uhesho xiritaanka kama dambaysta ah, waxaa kugu filan inaad u dirto wareysigaaga ku saabsan layligaaga xaqa aad u leedahay in la kansalo ka hor muddada joojinta ka hor.
6.3 Haddii aad joojiso Heshiiska muddada joojinta, waxaan kuu soo celin doonaa wixii lacag ah ee la helay, waxaanu bixin doonaa dib u bixinta iyadoon dib u dhicin, oo aan ka dambeynin maalmaha 14 ka dib maalinta aan ogaanno go'aankaaga si aad u joojiso heshiiska . Waxaan bixin doonaa lacag celinta (haddii ay jirto) iyadoo la adeegsanayo habka lacag bixinta sida aad u isticmaashay macaamilka bilawga ah, haddii aanad si kale kuugu heshiin; Xaalad kasta, laguma bixin doono khidmado laguu soo celinayo.
6.4 Haddii aad na weydiisatay in aan bilowno waxqabadka adeegyadda muddada joojinta, waxaa laga yaabaa in lagu weydiisto inaad na siiso qadarka ku xiran waxa la qabtay ilaa aad nala soo xiriirtid naga joojinta heshiiskaan.
7. Xaq naga dhigo inaan joojino
Waxaan joojin karnaa qandaraaska Qiimeentiga mar kasta oo aan ku siinno maalmo 3 ka hor ogeysiis qoran.
8. Ilaalinta xogta
8.1 Waxaad na ogolaaneysaa inaad haysato oo aad ka baartid xogtaada shakhsi ahaaneed ee ujeedada aad u leedahay qiimeynta, adiga oo ku siinaya qadarin iyo in lagula soo xiriiro alaabta la midka ah iyo / ama adeegyada aan rumaysannahay inay tahay mid xiiso leh.
8.2 Waxa kale oo aanu qori karnaa isgaadhsiin (adiga oo adeegsanaya telefoon iyo email) si aad u tababbartid ama u ilaaliso.
9. Shuruudaha kale ee muhiimka ah
9.1 Kuma noqon doonno masuuliyad ama masu'uul ka ah wixii ku fashilmay fulinta, ama dib u dhac ku yimaado, mid ka mid ah waajibaadkeena ku xusan qodobadan oo ay sababtay dhacdo ka baxsan kormeerkeena. Munaasabadda ka baxsan xakameyntan macnaheedu waa ficil kasta ama dhacdad ka baxsan kantaroolka macquulka ah, oo ay ku jirto ficil aan xadidnayn, qashin-qaadid ama farsamooyin kale oo warshadeed oo ay sameeyaan dhinacyada saddexaad, rabshadaha bulshada, rabshadaha, weerarrada, weerar argagixisada ama hanjabaad weerar weerar argagixiso, ama aan ahayn) ama hanjabaad ama diyaarin dagaal, dab, qarax, duufaan, daadad, dhulgariir, hoos u dhac, cudurro dabiici ah ama dabiiciga dabiiciga ah, ama fashilmida shabakadaha isgaarsiinta dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay.
9.2 Waxaan u wareejin karnaa xuquuqdeena iyo waajibaadkeena warqaddan hay'ad kale, laakiin tani ma saameyn doonto xuquuqdaada ama waajibaadkeena ku qoran warqadan.
9.3 Waxaad kaliya ku wareejin kartaa xuquuqdaada ama waajibaadkaaga waraaqdan ku qoran qof kale haddii aanu ku siino ogolaansho hore oo qoraal ah.
9.4 Heshiiskani wuxuu u dhexeeyaa adiga iyo annaga. Qof kale ma laha xuquuq kasta oo lagu dhaqan gelinayo mid ka mid ah ereyadiisa.
9.5 Kharash kasta oo warqaddan ku jirta ayaa si gooni ah u shaqeeya. Haddii ay jiraan maxkamad ama hey'ad ku habboon oo go'aan ka gaarta in mid ka mid ah ay sharci darro tahay, qodobbada soo haray waxay ku sii jiri doonaan awood buuxda iyo saameyn.
9.6 Haddii aan ku adkeysaneyno inaad ku adkaysato inaad fuliso waajibaadkaaga ku jira warqadan, ama haddii aanan ku xoojinayno xuquuqdeena aad naga qabateen, ama haddii aan dib u dhacno, taasi micnaheedu maaha inaan ka dhaafeyno xuquuqdeena adiga iyo macnaheedu maaha inaadan u hoggaansamin waajibaadkaas. Haddii aan ka dhaafno khidmad adiga kugu habboon, waxaanu ku sameyn doonaa oo keliya qoraal ahaan, taasi micnaheedu maaha inaan si toos ah uga dhaafi doonno wixii kuugu dambeeyey.
9.7 Warqadan waxaa xukuma xeerka Ingiriisiga. Adiga iyo annaguna waxaan ku heshiinay inaanu u gudbino maxkamadda Ingiriisiga ah ee aan ka reebanayn.
Mahad Celinta Shirkadda
Happy Energy Solutions Ltd (waxaan) waxaa ka go'an ilaalinta iyo ixtiraamidda asturnaantaada.
Nidaamkan (oo ay weheliso shuruudaha isticmaalka iyo dukumiintiyada kale ee loo soo gudbiyo) ayaa saldhig u ah macluumaadka shakhsiyadeed ee aan kaa soo aruurino, ama aad na siiso, ayaa naloogu shaqeyn doona. Fadlan si taxaddar leh u akhri si taxadar leh si aad u fahamtid fikradaha iyo ficiladayada ku saabsan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyo sida aan u daaweyn lahayn
Ujeedada Xeerka Ilaalinta Macluumaadka 1998 (Xeerka), xoghayaha xogta waa Happy Energy Solutions Ltd.
MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA KU SAABSAN BILOWGA
Waxaanu ururin karnaa oo naqshadeeynaa xogta soo socota ee adiga kugu saabsan: (a) Macluumaadka aad bixiso adigoo buuxinaya foomamka boggayaga www.happyenergy.co.uk (our site). Tani waxaa ka mid ah macluumaadka la bixiyay wakhtiga diiwaangelinta si loo isticmaalo boggayaga, amar badeecada, boostada loo diro ama codsashada adeegyo dheeraad ah. Waxaan sidoo kale ku weydiin karnaa macluumaadka markaad wax ka sheegto dhibaatadeena boggayaga; (b) Macluumaadka lagu siiyay ururrada kale ee aad ka bixisay oggolaanshahaaga ururadaas macluumaadkaaga u gudbiyay dhinacyada saddexaad; (c) haddii aad nala soo xiriirto, waxaa laga yaabaa inaan diiwaangelino waraaqahaas; (d) sidoo kale waxaan ku weydiineynaa inaad buuxiso sahanno aan u isticmaalno ujeedooyin cilmi-baaris ah, inkastoo aanad u baahnayn inaad ka jawaabto; iyo (e) faahfaahinta booqashadaada boggayaga oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, xogta taraafikada, xogta goobta, macluumaadka websaydhka iyo xogta kale ee isgaarsiinta, haddii ay taasi tahay mid looga baahan yahay ujeeddadayada biilasha ama khayraadka aad u leedahay.
2 CINWAANKA IYO COOKIYADA
2.1 Waxaa laga yaabaa inaan aruurino macluumaadka ku saabsan kombuyuutarkaaga, oo ay ku jiraan halka laga heli karo cinwaankaaga IP, nidaamka hawlgalka iyo nooca browser, nidaamka nidaamka iyo in macluumaadka wadajir u soo gudbiyaan xayeysiiyahayaga. Tani waa xogta tirakoobka ah ee ku saabsan ficilada iyo qaab-dhaqameedkayaga, oo ma aqoonsana qof shaqsi ah.
2.2 Our site sidoo kale waxay isticmaalaan Google Analytics, adeegga falanqaynta webka ee ay bixiso Google Inc. (Google). Google Analytics waxay isticmaashaa "cookies", kuwaas oo ah faylasha qoraalka lagu rakibay kombuyuutarkaaga si ay u caawiyaan bogga falanqaynta sida aad u adeegsanayso boggayaga. Macluumaadka ka soo baxa cookie ee ku saabsan isticmaalkaaga bogga (oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP) waxaa laguugu gudbin doonaa oo ku keydin doonaa Google macaamiisha Maraykanka. Google wuxuu u isticmaali doonaa macluumaadkan ujeedada qiimeynta isticmaalkaaga internetka, ururinta warbixinno ku saabsan waxqabadka shabakadda ee ku shaqeeya boggaga internetka iyo bixinta adeegyo kale oo la xiriira isticmaalka internetka iyo isticmaalka internetka. Google ayaa sidoo kale u wareejin kara macluumaadkan dhinaca dhinacyada saddexaad halkaasoo looga baahan yahay inay sharcigaas sameeyaan, ama marka dhinacyadan saddexaad ay ka baaraandegaan macluumaadka Google. Google ma'aha cid kale oo la xariira cinwaankaaga IP adiga oo xogta kale ee Google qabtay.
3 ISTICMAALKA KOOWAAD KU SAABSAN QAADASHADA
3.1 Caawinta Macmiilka ee muraayadda baraha badmaaxeyaashu waxay kuu sheegi doonaan sida looga hortago galkaagaaga inuu aqbalo cookie cusub, sida loo helo bakhtiyaa-nasiibku wuxuu kuu sheegi doonaa markaad hesho cookie cusub iyo sida loo jajabiyo cookies dhamaanteed.
3.2 Waxa kale oo aad awoodi kartaa inaad tirtirto ama tirtirto macluumaadka la midka ah ee lagu isticmaalo shabakadaha internetka, sida Flash cookies, adiga oo bedelaya goobaha lagu daro ama booqo bogga internetka ee soo saaraha.
3.3 Sida kukiyadaha ayaa kuu oggolaanaya inaad ka faa'iidaysato qaar ka mid ah Website-yada muhiimka ah, waxaan kugula talineynaa inaad ka tagto iyaga. Tusaale ahaan, haddii aad xakamayso ama diiddo kakoobid, ma awoodi doontid inaad weydiisatid ama aad gudbisid xogta shakhsiga ah ee internetka. Haddii aad ka tagto cookies ayaa loo soo jeestay, xasuuso inaad saxeexdo markaad dhameysid isticmaalka kombiyuutarka la wadaago.
MAGAALADA XIDHIIDHA LOO BAAHANYAHAY
4.1 Si aan u hoggaanno shuruudo cusub, waxaan isticmaalnaa nidaam ah noocyada kala duwan ee cookies ee aan ku isticmaalno boggayaga, ama laga yaabo in ay hoos u dhacaan dhinacyada saddexaad iyada oo loo marayo boggayaga internetka. Qeybinta waxaa diyaariyay Rugta Ganacsiga ee Caalamiga ah ee Ganacsiga Caalamiga ah, waxayna sharaxeysaa waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan cookie-yada aan isticmaalno, sababta aan u isticmaalno, iyo hawlaha aad lumin doonto haddii aad go'aansato inaadan rabin inaad ku haysato qalabkaaga.
5 WAA MAXAY COOKI?
5.1 Cookies waa faylasha qoraalka ah oo ay ku jiraan xog kooban oo kumbuyuutar ah, mobile ama qalab kale marka aad booqanayso website. Kukiyada ayaa markaa dib loogu soo celinayaa bogga asalka ah ee booqasho kasto, ama shabakad kale oo aqoonsanaysa in cookie. Kukiyada waa waxtar leh sababtoo ah waxay u oggolaanayaan website inay aqoonsadaan qalabka isticmaalaha.
XINAASH Cuntooyinka joogtada ah - Kukiyadaasi waxay ku sii jiraan qalabka isticmaalaha muddada waqtiga lagu qeexay cookie. Waxay ku shaqeeyaan mar kasta oo uu isticmaaluhu booqdo website-ka kaas oo abuuray cookie gaar ah.
Kutubka Kulanka 5.3 - Kukiyadaas waxay u oggolaaneysaa inay hawlwadeennada shabakada si ay ula xiriiraan ficilada isticmaale inta lagu jiro fadhiga browserka. Kulanka browser-yada wuxuu bilaabmayaa marka uu qofku furo daaqada browserka oo uu dhameeyo marka ay xiraan daaqada browserka. Kukiyada fadhiga ayaa si ku meel gaar ah loo abuuray. Marka aad xirto browserka, dhammaan cookies session waa la tirtiray.
5.4 Kukiyada waxay sameeyaan shaqooyin badan oo kala duwan, sida adoo u ogolaanaya inaad dhexdhexaadiso bogagga si karti leh, xasuusinta doorbidka, iyo guud ahaan wanaajinta khibrada isticmaalaha. Waxay sidoo kale kaa caawin karaan inaad hubiso in xayeysiisyada aad ku aragto internetka ay aad iyo aad muhiim u tahay adiga iyo danahaaga.
5.5 Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cookies ee ah www.allaboutcookies.org iyo www.youronlinechoices.eu.
MADAXWEYNAHA CUSUB EE LOO ISTICMAALO WEBSITE
Liistada dhammaan cookies ee lagu isticmaalo Website-ka adigoo ku qoran qaybta hoose ayaa lagu qeexay.
6.1 Cuntooyinka adag ee lagama maarmaanka ah Kukiyada waxay awood u leeyihiin adeegyada aad si gaar ah u waydiisatay. Noocyada koobiyooyinka ee aadka u adag, lama oggola ogolaansho.
XEREMI Kukiyadaas waa mid muhiim ah si ay kuu suurageliso inaad u dhaqaaqdo agagaarka oo aad isticmaasho sifooyinkiisa, sida helitaanka aagagga amniga ee goobta. Haddii aadan helin adeegyadan "cookies" waxaad ku weydiisan kartaa, sida dambiilaha shopping ama e-billing, laguma siin karo.
Xamuusyada Waxyeelada Waxqabadka (cookies) Cunnooyinka Kuwani waxay ururiyaan macluumaadka qarsoodiga ah ee bogagga la booqday. Adigoo isticmaalaya bogga, waxaad ku raacsan tahay in aan kugeli karno noocyada cookies ee qalabkaaga.
6.4 Kukashadaani waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan sida booqdayaashu u isticmaalaan goobta, tusaale ahaan bogagga booqdayaasha badanaa ay aadaan, iyo haddii ay helaan fariimo qalad ah ee bogagga shabakadda. Kukiyadaas ma soo ururiyaan macluumaadka aqoonsanaya booqde. Dhammaan macluumaadka kakooban ee la soo ururiyey ayaa la isku daraa oo sidaas darteed magac la'aan. Waxaa loo isticmaalaa oo kaliya si loo hagaajiyo sida goobta u shaqeyso.
Kombiyuutarada Shaqeynta 6.5. Kukiyadaas waxay xasuusnaadaan doorashooyinka aad sameyso si aad u hagaajiso khibradaada. Adigoo isticmaalaya bogga, waxaad ku raacsan tahay in aan kugeli karno noocyada cookies ee qalabkaaga. Kukiyadaas waxay u oggolaaneysaa in goobta ay ku xasuusato doorashooyinka aad sameyso (sida magacaaga, luuqada ama gobolka aad ku jirto) oo aad bixisid sifooyin shakhsiyadeed. Kukiyadaas waxaa kale oo loo isticmaali karaa in la xusuusto isbeddelka aad samaysay ee cabbirka qoraalka, midabada iyo qaybaha kale ee bogagga shabakadda ee aad ku habeysiin karto. Waxa kale oo loo isticmaali karaa inay bixiyaan adeegyo aad codsatay sida daawashada filim ama faallooyinka blogga. Macluumaadka macluumaadkaas kakooban waxaa laga yaabaa in la cadeeyo oo aysan ku socon karin dhaqdhaqaaqaaga booqashada bogagga kale.
6.6 Bartilmaameed ama xayaysiisyo xayeysiin ah Kukadiyadan waxay ururiyaan macluumaadka ku saabsan caadooyinkaaga xayeysiinta si ay u sameeyaan xayeesiin ku habboon adiga iyo danahaaga. Kukiyadaas waxaa loo isticmaalaa in ay bixiyaan xayeysiisyo waxtar u leh adiga iyo danahaaga. Waxa kale oo loo isticmaalaa in la yareeyo tirada jeer ee aad ku aragto xayaysiin iyo sidoo kale caawinta qiyaasidda waxtarka ololaha xayeysiinta. Waxaa badanaa lagu meeleeyaa shabakadaha xayaysiinta iyadoo fasax noo ah. Waxay xasuustaan ​​inaad booqatay websaydhka iyo macluumaadkaan waxaa lala wadaagaa ururada kale sida xayeysiiyaha. Inta badan bartilmaameedka ama kakoobyada xayeysiisku waxay ku xirnaan doonaan hawlaha goobta ee ay bixiso hay'adda kale.
Aqoonsiga Booqdayaasha Khaaska ah _utma Kormeeraha gaarka ah ee booqda bog boggaaga ah waxaa la siiyaa aqoonsi gaar ah iyada oo loo marayo __utmacookie. Sidan, booqashooyinka xiga ee shabakada internetka adiga oo isticmaalaya shabakad isku mid ah ayaa lagu duubay sida ay u leeyihiin booqdaha isku midka ah. Sidaa darteed, haddii qofku la falgalo website-kaaga oo isticmaalaya Firefox iyo Internet Explorer labadaba, warbixinnada Analytics waxay raadinayaan dhaqdhaqaaqa hoos yimaada laba qof oo soo booqday. Sidoo kale haddii shabakad isku mid ah ay isticmaalaan laba qofood oo kala duwan oo booqdayaasha ah, laakiin koontada kombuyuutarka ee kala duwan mid kasta, hawshu waxa lagu diiwaangelin lahaa laba aqoonsi oo u gaar ah. Dhinaca kale, haddii shabakadu ay dhacdo in loo isticmaalo laba qof oo kala duwan oo wadaaga koontada kambiyuutarka ee isku midka ah, hal aqoonsi booqde oo gaar ah ayaa la duubay, inkastoo laba qof oo gaar ah ay goobta u galaan. Wuxuu dhacayaa hal maalin
Go'aaminta Kulanka Booqdaha _utmb Google Analytics raadinaya ga.jsssa laba cookies si loo dhiso kulan. Haddii mid ka mid ah laba cookies labadaba maqnaanshaha, hawlaha dheeraadka ah ee isticmaalaha ayaa bilaabaya bilawga kulan cusub. Waxay kudhacdaa xaasaska 30
Go'aaminta kulamada martida _utmc Ka eeg kor Waxay ku dhacdaa sanadaha 2 laga bilaabo cusbooneysiinta
Muuqaal Iskujira _utmv Waxaad qeexi kartaa qaybahaaga gaarka ah si aad uga warbixiso xogtaada gaarka ah. Markaad isticmaasho _setCustomVar () habka koodhka raadraaca si aad u qeexdo doorsoomayaasha gaarka ah, Google Analytics wuxuu adeegsadaa cookie si uu ula socdo oo uga warbixiyo macluumaadkaas. Xaaladda isticmaalka caadiga ah, waxaad u isticmaali kartaa habkan si aad u soocdo boggaaga soo booqda adoo adeegsanaya nuqul gaar ah oo ay ku doortaan website-kaaga (dakhliga, da'da da'da, doorbidada alaabada). Waxay ku dhacdaa bilaha 6 laga bilaabo cusbooneysiinta
Raadinta Gaadiidka Gaadiidka & Gaadiidka _utmz Marka booqdayaashu ay gaadhi karaan goobtaada adoo adeegsanaya natiijada raadinta raadinta, xiriir toos ah, ama xayeysiis ku xiran boggaaga, Google Analytics waxay ku kaydisaa nooca macluumaadka gudbinta ee cookie. Waxay ku dhacdaa bilaha 6 laga bilaabo cusbooneysiinta
Raadinta Gaadiidka Taraafiga iyadoo la adeegsanayo java Has_js qof haysta browserka js-enabled ayaa booqday goobta hore (laga yaabee in rakibo hore ama wax Waxay kudhacdaa xaasaska 30
7 BEHAVIORAL IYO SHARCIYADA ONLINE
7.1 Tilmaam oo loogu talagalay xayeesiimaha dabeecadda iyo asturnaanta internetka waxaa soo saaray warshadaha xayaysiiska ee internetka kuwaas oo laga heli karo www.youronlinechoices.eu. Tilmaamuhu wuxuu ka kooban yahay sharaxaad ku saabsan qorshaha is-beddelidda ee IAB si uu kuu oggolaado xakamaynta weyn ee xayeysiiska aad aragto.
8 MACLUUMAADKAN KA HELI KARAA MACLUUMAADKA QOFKA
8.1 Xogta aan kaa soo aruurinno waxaa laga yaabaa in loo wareejiyo, laguna kaydiyo, meel ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA). Waxaa sidoo kale laga baaraandegi karaa shaqaale ka shaqeynaya bannaanka EEA oo nagu shaqeynaya ama mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasheena. Shaqaalahaas ayaa laga yaabaa inay ku hawlan yihiin, waxyaabo kale, fulinta amarkaaga, faahfaahinta faahfaahinta bixintaada iyo bixinta adeegyada taageerada. Adiga oo gudbinaya xogtaada shakhsiyadeed, waxaad ku raacsan tahay wareejinta, kaydinta ama ka shaqeynta. Waxaanu qaadi doonaa dhammaan talaabooyinka macquul ah ee lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in xogtaada si haboon loo daaweeyo si waafaqsan nidaamka sirta ah.
8.2 Dhammaan macluumaadka aad na siisid waxaa lagu keydiyaa xafiisyadayada ammaanka. Halka aan ku siinnay (ama meesha aad dooranayso) lambarka sirta oo kuu sahli kara inaad qaybo ka mid ah boggayaga ka hesho, adiga ayaa ka masuul ah inaad xafidan ereyga sirta ah. Waxaan kaa codsaneyn inaadan cidna wadaagin erayga sirta ah.
8.3 Nasiib darro, gudbinta xogta adoo isticmaalaya internetka si buuxda ma ahan mid amaan ah. Inkasta oo aan samayn doono waxkeena ugu fiican si aan u ilaalino macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, ma xaqiijin karno ammaankaaga xogtaada loo gudbiyay boggayaga; wixii gudbin ah waa khatar adiga kuu gaar ah. Marka aan helno macluumaadkaaga, waxaanu adeegsan doonaa habraac adag oo adag iyo sifooyinka amniga si aan isugu dayno in aan ka hortago helitaanka aan la oggolayn.
9 ISTICMAASHO MACLUUMAADKA
9.1 Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka adiga kugu saabsan ee ku saabsan siyaabahan soo socda: (a) si loo hubiyo in waxyaabaha ka yimid boggayaga lagu soo bandhigay habka ugu wax ku oolsan adiga iyo kombuyuutarkaaga; (b) inuu ku siiyo macluumaad, badeeco ama adeegyo aad naga codsatid annaga ama aan dareemeyno inaan daneyneyno, halkaasoo aad ogolaatay in lagala soo xiriiro ujeedooyinkaas; (c) Inay fuliyaan waajibaadkeena ka soo baxa qandaraasyo kasta oo lagaa dhexgalo adiga iyo annaga; iyo (d) inuu kugu wargaliyo isbedelka adeegeena.
9.2 Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa macluumaadkaaga, ama u oggolaan karnaa dhinacyada saddexda ah ee la soo xulay inay isticmaalaan macluumaadkaaga, si ay kuu siiyaan macluumaadka ku saabsan alaabta iyo adeegyada kuwaas oo laga yaabo inay xiiseynayaan adiga ama annaga ama ay kugula soo xariiri karaan kuwan boostada ama telefoonka.
9.3 Haddii aad tahay macmiil joogta ah, waxaanu kugula soo xidhiidhi doonaa oo keliya habka elektaroonigga ah (e-mail ama SMS) macluumaadka ku saabsan alaabooyinka iyo adeegyada sida kuwa ku saabsan iibka hore ee adiga kugu habboon.
9.4 Haddii aad tahay macaamiil cusub, iyo halka aan u ogolaaneyno xulafada saddexaad in ay isticmaalaan macluumaadkaaga, annaga (ama iyaga) ayaa kugula soo xiriiri doona habka elektarooniga ah haddii aad ogolaatay tan. 9.5 Haddii aadan rabin in aan macluumaadkaaga u isticmaalno sidan, ama si aad u gudbiso faahfaahintaada dhinacyada saddexaad ee ujeedooyinka suuq-geynta, fadlan noogu soo wargeli mail@happyenergy.co.uk.
10 MACLUUMAADKA MACLUUMAADKAAGA
Waxaa laga yaabaa inaan u sheegno macluumaadkaaga shakhsiyeed dhinacyada saddexaad:
(a) haddii ay dhacdo in aan iibino ama iibino ganacsi ama hantida, taas oo dhici karta inaanu shaaca ka qaadno xogtaada shakhsiyadeed ee iibsadaha soo iibsadaha ama iibsadaha ganacsigan ama hantida; ama
(b) haddii aan ku jirno waajibaad ah inaan ku faafinno ama wadaagno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed si aan u hoggaanno waajibaad sharciyeed, ama si aan u dhaqan-galino ama u fulino shuruudaha isticmaalka iyo heshiisyada kale; ama
(c) Inuu ilaaliyo xuquuqda, hanti, amniga Best Energy Solutions Ltd, macaamiisheena, ama kuwa kale. Tani waxaa ka mid ah is-weydaarsiga macluumaadka shirkadaha kale iyo ururada ujeeddooyinka ilaalinta khiyaanada iyo dhimista khatarta deynta.
11.1 Waxaad xaq u leedahay inaad na weydiiso inaanan ka shaqeynin macluumaadkaaga shakhsiyeed ee ujeedooyinka suuq-geynta. Sida caadiga ah waxaanu kugu wargelinaynaa (kahor intaadan aruurin xogtaada) haddii aan dooneyno in aan macluumaadkaaga u adeegsano ujeedooyinkaas ama haddii aan dooneyno in aan macluumaadkaaga u sheegno dhinac saddexaad oo ah ujeedooyinkaas. Waxaad isticmaali kartaa xuquuqdaada si aad uga hortagto farsamooyinkaas adoo hubinaya sanduuqyada qaar ee foomamka aan isticmaalno si aan u ururino macluumaadkaaga. Waxaad sidoo kale ku tababaran kartaa wakhti kasta adiga oo nagala soo xiriiraya boostada emailka@happyenergy.co.uk.
11.2 Our site, laga bilaabo waqti ka, waxaa ku jira xiriirada iyo ka soo website-ka ah ee shabakadaha our lammaanaha, xayeysiinta iyo xiriiriyayaasha. Haddii aad raacdo iskuxirto mid ka mid ah boggaan internetka, fadlan ogow in shabakaddaani ay leeyihiin siyaasadahooda gaarka ah iyo inaanan aqbalin masuuliyad ama masuuliyad siyaasadeed. Fadlan hubi sharciyadan ka hor intaanad gudbin macluumaadka shakhsi ee bogagga internetka.
12 WANAAGSAN WARBIXIN
13 waa isbedelka siyaasad-dejinta
Isbedel kasta oo aan u sameyn karno siyaasadeena asturnaanta ee mustaqbalka ayaa lagu soo dhejin doonaa boggan iyo, haday ku haboon tahay, laguugu soo diro email ahaan.
Su'aalaha, faallooyinka iyo codsiyada ku saabsan siyaasaddan gaarka ah ayaa la soo dhaweynayaa waana in lagu xaliyaamail@happyenergy.co.uk.
Fadlan riix linkka hoose si aad u akhrido Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka:
HP021 - Siyaasadda Badbaadinta Macluumaadka Guud ee Kaydka
Nidaamka Tayada Tamarta ee Wanaagsan
Happy Energy Solutions Ltd ('Ururka') waxay ujeedadeedu tahay in ay bixiso badeecooyin lacag la'aan ah macaamiishooda wakhtigeeda iyo miisaaniyad ahaan.
Ururku wuxuu ka shaqeeyaa Nidaamka Maareynta Tayada oo uu helay BS EN ISO 9001: shahaadada 2008, oo ay ka mid tahay dhinacyo gaar ah oo lagu bixinayo maaliyad iyo maareyn loogu talagalay rakibidda hagaajinta tamarta korontada ee guryaha ganacsiga iyo guryaha.
Maamulku waxaa ka go'an:
Horumarinta iyo hagaajinta Nidaamka Maareynta Tayada
Si joogta ah u wanaajiya waxgalnimada Nidaamka Maamulka Tayada
Hagaajinta qanacsanaanta macaamilka
Maamulku wuxuu leeyahay ballan qaad joogto ah:
U hubso in macmiilku u baahan yahay iyo rajooyinka la go'aaminayo oo la fulinayo ujeedada lagu gaarayo qanacsanaanta macaamilka
Kala xiriir dhamaan hay'adaha muhiimada ah in la daboolo baahida macaamiisha iyo dhammaan shuruudaha sharciga iyo shuruudaha.
Samee Siyaasadda Tayada iyo Himilooyinka
In la hubiyo in qiimeynta maamulka ay dejiso oo dib u eegto ujeedooyinka tayada, iyo warbixinnada ku saabsan natiijada Guddiga Hanti Dhexgalka iyada oo ah hab lagu ilaaliyo oo loo qiyaaso geeddi-socodka iyo wax-ku-oolnimada Nidaamka Maamulka Tayada
Hubi helitaanka ilaha dhaqaalaha
Nidaamka Maareynta Tayada waxaa lagu qeexay Buugan Tayada.
Dhamaan shaqaaluhu waxay fahmaan shuruudaha Siyaasaddan Tayada iyo inay raacaan waxyaabaha ku jira Buugga Tayada.
Ururka wuxuu u hoggaansamaa dhammaan shuruudaha sharciga iyo shuruudaha. Ururka wuxuu si joogto ah uula socdaa waxqabadka tayada iyo wuxuu hagaajinayaa hagaajinta marka ay habboon tahay.
Siyaasaddan tayada ayaa si joogta ah loo eegayaa si loo xaqiijiyo ku haboonaanta sii socota.
Siyaasaddan waxaa lagu wargeliyaa dhammaan shaqaalaha, alaab-qeybiyeyaasha iyo qandaraaslayaal hooseeya waxaana loo helaa dadweynaha.
Nidaamka Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah
Happy Energy Solutions Ltd ("Ururka") wuxuu aqoonsan yahay muhiimada ilaalinta deegaanka iyo inuu ka go'an yahay in uu u hawlgalo ganacsigiisa si masuuliyadeed iyo iyada oo waafaqsan dhammaan shuruudaha sharciga ah ee la xiriira bixinta maalgelinta, maalgelinta iyo maareynta dhismaha tamarta dayactirka tamarta ee ganacsiga iyo guryaha guryaha. Waa nidaamkii loo qoondeeyay Ururka in uu la shaqeeyo iyo in uu xiriir wanaagsan la yeesho hay'adaha sharci dajinta.
Waa ujeeddada Ururku u leeyahay fulinta dhammaan tallaabooyinka si macquul ah loo fulin karo si ay u daboolaan, uga gudbaan ama u kobciyaan shuruudaha lagama maarmaanka ah ama la rabo iyo si joogta ah loo wanaajiyo waxqabadka deegaanka iyadoo loo marayo hirgelinta soo socda:
Qiimee oo si joogto ah dib-u-qiimeynta saameynta deegaanka ee waxqabadyada Ururka
Tababarka shaqaalaha ee arrimaha deegaanka
Yaree wax soo saarka qashinka
Yaree khasaariinta alaabta
Yaree burburka tamarta
Horumarinta isticmaalka qalabka dib loo cusboneysiin karo iyo cusbooneysiinta
Yaree iyo / ama xaddidaa soosaarka wasakhda biyaha, dhulka iyo hawada
Xakamee qaylo-dhaanta maqalka laga soo bilaabo hawlaha
Yaree khatarta khatarta dadweynaha iyo shaqaalaha guud ahaan howlaha iyo hawlaha ay qabteen Ururka
Siyaasadda Ilaalinta Macluumaadka
Dammaanadda Tamarta ayaa aqoonsanaysa in qof kastaa uu leeyahay xuquuq ku saabsan sida macluumaadka shakhsi ahaaneed loo xallinayo. Macluumaadka qarsoodiga ah ee shaqaalaheena, macaamiisha iyo macluumaadka shakhsiyadeed ee macluumaadka shakhsiyadeed waa mid muhiim ah, shirkaduna waxay aqoonsaneysaa baahida loo qabo in lagu daaweeyo dhaqdhaqaaqyada aan ka soo ururinno, kaydinno oo ku hawlanno macluumaadka shakhsi ahaan habboon oo sharci ah. Sidaas awgeed, Energy Energy waxay u hoggaansamaysaa qodobada Xeerka Ilaalinta Macluumaadka 1998 (Xeerka) iyo xeerarka ku xiga.
Kooxda maareynta shirkadu waxay qaadi doontaa tallaabooyin ilaa iyo haatan si macquul ah loola socon karo si loo xaqiijiyo siddeed qodob oo muhiim ah oo lagu faahfaahiyay ficilka lagu soo bandhigay laguna hirgalay dhammaan hababka iyo waxqabadyada ay shirkadu ku yeelan doonto xogta shakhsi ahaaneed.
Kooxda maamulka ayaa hubin doonta in horumar ku filan oo lagu ilaalinayo dhammaan software-ka iyo dukumintiyada xigta ee loo isticmaalo diiwaangelinta macluumaadka shakhsiyeed. Dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya macluumaadka ayaa si haboon loogu tababbarayaa oo lagu faahfaahin doonaa hababka lagama maarmaanka ah ee loo hayo macluumaadka noocaas ah iyo kormeer ku filan ayaa la siin doonaa heerarka oo dhan.
Happy Energy waxay mar walba ku celineysaa heerka diiwaangelinta ee ku habboon Xafiiska Komishanka Macluumaadka oo si wadajir ah ula shaqeeya hanuunin iyo tilmaamo.
Barnaamijyada shaqada ee tamarta ee Happy Energy; illaa inta macquul ah ee la aqbali karo, kobcinta siddeed qodob ee muhiimka ah ee Sharciga.
Qof kasta oo ka shaqeeya xogta shakhsiga adoo metelaya Energy Energy waa inuu u hoggaansamaa mabaa'diida 8 ee hirgelinta habdhaqan wanaagsan. Macluumaadka shakhsi ahaaneed waa inuu:
Si cadaalad ah oo sharci ahaan loo shaqeeyo;
U shaqeynaya ujeddooyin xadidan oo gaar ah;
Ku filan oo ku habboon ujeedo, ma aha xad-dhaaf;
Uma haysan wax ka badan intii loo baahnaa ujeedada gaarka ah;
Ku shaqeynaya xuquuqda macaamiisha;
Looma wareejin wadamada aan lahayn badbaadin ku filan;
Hagaajinta Ammaanka Warbixinta
By damaanad ah sirta, sharafta iyo helitaanka ee xogta shakhsiyadeed ee ay qabteen Energy Energy, waxaanu sii wadi doonaa ammaanka macluumaadka:
Qarsoodi - dadka kaliya ee loo oggol yahay inay isticmaalaan xogta waxay heli karaan.
Xasillooni - xogta shakhsi ahaaneed waa inay ahaataa mid sax ah oo ku haboon ujeedada laga rabo in la farsameeyo.
Isticmaalka - isticmaalayaasha idman waa inay awoodaan inay helaan macluumaadka haddii ay u baahan yihiin ujeedooyin la oggol yahay. Macluumaadka shakhsi ahaaneed waa in lagu keydiyaa nidaamkayaga kombiyuutarkeena halkii aad ka heli lahayd PC-yada shakhsi ahaaneed
Kala shaqeynta xuquuqda macaamiisha
Energy Energy waxay hubin doontaa in xogta la baaraandegayo iyadoo loo eegayo xuquuqda macaamiisha. Macaamiishu waxay xaq u leeyihiin:
Codso in la helo xog kasta oo ku saabsan iyaga oo ku saabsan xoghaye xogeed;
Ka hortagaan falanqaynta macluumaadkooda ujeedooyinka suuq-geynta;
Weydiiso in xogta aan sax ahayn wax laga beddelay;
Ka hortagga farsamada taas oo keeni karta dhaawac ama cidhiidhi ah naftooda ama qof kasta;
Action la taaban karo
Shirkaddu waxay qaadi doontaa tallaabooyinka soo socota ee soo socda si loo hubiyo in la raaco Sharciga:
Macluumaadka la raadiyay oo la duubay waxay ku kooban yahiin kuwa loo baahan yahay ee ujeeddooyinka shirkadda iyo la-hawlgalayaasha iyo in kale;
Dhammaan xogta macluumaadka ee xogta macmiilku waxay noqon doontaa furaha badbaadada ammaanka, oo leh heerar sare oo ammaan ah oo la heli karo shaqaale gaar ah xogta xasaasiga ah;
Haddii macluumaadka loo gudbiyo wada-hawlgalayaasha mashruuca waxaa lagu gudbiyaa foom aan aqoonsiga shakhsi ahaaneed aan suurtagal ahayn, halkaasoo ogolaanshaha macaamiishii hore aan lagu heshiin;
Halka kahor oggolaanshaha macaamiisha horay loo oggolaaday, macluumaadka loo gudbiyay lamaanayaasha mashruuca waxay noqon doonaan furaha badbaadada;
Macluumaadka macluumaadka shakhsi ahaaneed laguma gudbin EU;
Kontaroolada gelitaanka ayaa la dhaqan galin doonaa qof kasta oo ajnebi ah oo lagu arkay goobaha la xaddiday ayaa la soo wargalin doonaa;
Miisaska iyo kabadhada waa in lagu xakameeyaa haddii ay hayaan macluumaad qarsoodi ah nooc kasta, (Macluumaadka shakhsiyeed marwalba waa loo tixgeliyaa qarsoodi.);
Soo-saaridda dukumiintiyada waraaqaha oo ay ku jiraan macluumaadka qarsoodiga ah ayaa si ammaan ah loo burburin doonaa;
Haddii xogtu tahay in lagu keydiyo qalab kasta oo la qaadi karo ama laga saari karo macluumaadka waa in lagu qortaa, sirta la ilaaliyo oo si ammaan ah loo tirtiro marka aan loo baahnayn;
Isticmaalayaasha macluumaadka waa in ay hubiyaan in kormeerayaasha shakhsiyadeed aysan muujin macluumaadka qarsoodiga ah dadka soo gudbiya-iyaga oo ay ka gooyaan kombuyuutarkooda marka aan la sii joogin;
Macluumaadka shakhsiga ah oo ay ku jiraan macaamiisha ama credit card ama macluumaadka kaadhka debit waa in lagu duubo qaab kasta, sida warqadda, mobile, e-mailka, kaydinta la qaadi karo tusaale ahaan, oo aan ahayn goobta bixinta gaarka ah. Haddii shaqaale kasta laga helo in lagu diiwaan geliyo macluumaadkan waxaa lagu magacaabi karaa anshax xumo weyn, taasoo macquul noqon karta in shaqada laga joojiyo shaqada iyo baadhitaan dheeraad ah oo hay'adaha ku habboon.
Dib u Eegista Siyaasadeed
Siyaasaddan si joogto ah ayaa dib loogu eegi doonaa sida ugu muhimsan (ugu yaraan hal sano oo isbeddel ah).
Marka la sameynayo dib-u-eegista siyaasadda, waxaa loo tixgelinayaa arrimahan soo socda:
Guidance - Hanuunin kasta ama sharci cusub ayaa dib loo eegi doonaa saameynta iyo hordhaca hawlaha hadda jira iyo kuwa la soo jeediyey.
Ururka - Dib-u-eegis ku saabsan hay'adda shirkadda oo ay ku jirto isbeddelada si loo hubiyo in masuuliyadaha ilaalinta xogta si cad loo qeexay marwalba dhammaan shaqaalaha dhammaan heer kasta.
Control - In la hubiyo in shuruudaha ilaalinta xogta laga hirgeliyo dhammaan shirkadaha dhammaan shaqaalaha iyo in tababarka si joogto ah loo qabto si loo taageero heerarkaas.
Kormeer iyo dib-u-eegis - Dhammaan shaqaalaha ayaa la siin doonaa nuqul ka mid ah siyaasadda ilaalinta xogta marka loo soo bandhigo shirkadda iyo masuuliyadaha shakhsi ahaaneed ee la soo jeediyey. Jeegaga iyo baaritaanada joogtada ah ayaa la sameyn doonaa si loo xaqiijiyo in siyaasadda lagu dhaqmo.
Maaraynta Ilaalinta Macluumaadka
Nidaamkan waxaa dib u eegaya Sarkaalka Sare ee Maamulka Sannadlaha ah iyada oo lala tashanayo maamulayaasha tamarta ee "Happy Energy". Maamuluhu wuxuu leeyahay guud ahaan mas'uuliyadda hirgelinta qorshahan iyo guddiga ayaa hubin doona in dhaqaale ku filan oo lagu taageerayo siyaasadda.
Si loo gaaro ujeedooyinka iyo ujeedooyinka siyaasadeed, arrimahaas waxaa si joogta ah loogu soo bandhigi doonaa dareenka kooxda maamulka kooxda inta lagu jiro maareynta maamulka iyo kulamada guddiga.
Shaqaaluhu waa inaanay shaki ku jirin in shirkadu u adeegsan doonto habdhaqan anshaxeed shaqaale kasta oo jebiya siyaasadda ilaalinta xogta shirkadda. Tani waxaa ka mid ah hab kasta oo gaar ah iyo nidaamyada shaqada, tilmaamaha, tababarka iyo habraaca loo dejiyey ilaalinta macluumaadka lagu hayo qayb ka mid ah hawlaha shirkadda.
Nidaamkan waa in lala akhriyaa iyada oo la tixraacayo siyaasadda wada-xaajoodka iyo Nabadgelyada Isgaadhsiinta.